Haweeney isdishay markii ninkeeda uu ka been abuuray geeridiisa - Aayaha
Ninkaasi markii dambe waxa uu isu dhiibay booliska.
34-jirkan ayaa loo maleeyay inuu dhintay kaddib markii gaarigiisa laga helay webi dhexdii, walow isla goobtaasi aanan maydkiisa laga helin.
Xaaskiisa umuusan sheegin qorshaha uu degayay waxa ayn run moodday inuu si caadi ah u dhintay.
Haweeynaydaasi waxa ay iyada iyo carruurteediiba isku tuureen barkad ay biyo ku jiraan kaddib markii ay online-ka soo dhigtay qoraal kooban oo caddeynaya inay isdilayaan.
Ninka oo ay boolisku sheegayaan in qoyskiisa lagu magacaabo He, ayaa Jimcihii isu soo dhiibay booliska deegaanka Xinhua ee gobolka Hunan.
Waxaa ninkaasi loo xiray inuu doonayay inuu lacago si aan sax ahayn uga qaadan rabay shirkad caymis ah iyo inuu si ogaal ah hanti u burburiyay, booliska Xinhua ayaa sidaasi ku sheegay bayaan uu soo dhigay barta WeChat oo ah bar ay ku wada xiriiraan bulshada Shiinaha.
Bilowgii bishii Sibteember Mr He ayaa isagoon xaaskiisa wargelin waxa uu iibsaday qorshe caymis oo ku kacaya hal milyan oo Yuan oo u dhiganta $145,000 oo doolar, booliska ayaa sidaasi sheegay.
Sida lagu sheegay warbixin laga sii daayay Idaacadda dowladda ee Codka Shiinaha, xaaska ninkaasi ee geeriyootay ayaa la sheegay in dhaqaalaha loo weecinayo.
19-kii bishii Sibteembar, Mr He waxa uu been abuurka geeridiisa u isticmaalay gaari uu soo kiraystay isagoo ku matalay inuu shil galay, booliska ayaa yiri. Waxaana markii dambe la ogaaday inuu galay dayn ka badan 100,000 Yuan.
11-kii bishii Oktoobar, waxaa maydka xaaskiisa oo 31-jir aheyd, wiilkoodii afar jirka ahaa iyo gabadhoodii saddex jirka aheyd laga helay barkad ku taal gurigooda, sida ay ku warrantay Idaacadda dowladda ee Codka Shiinaha.
Fariin kooban oo ay haweeneydaasi soo dhigtay barta WeChat, ayaa waxa ay ku qortay inay doonayso inay ninkeeda ka dabatagto, waxa ayna intaa ku dartay “waxaan weligey doonayay in qoyskeenna afarta ah abid uu wada joogo”, Idaacadda Codka Shiinaha ayaa intaasi sii raacisay.
Mr He ayaa maalintii xigtay booliska isku soo dhiibay.
Waxoogaa markaas ka hor ayuu online-ka soo dhigay muuqaal si weyn ay dadku u wadaageen, kaas oo uu ooyayo sheegayana inuu lacagta u daynsaday si uu ugu daweeyo gabadhiisa saddex jirka ah ee xanuunsanayso.
Dhacdadaasi ayaa todobaadkii la soo dhaafay si weyn loogu hadalhayay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto ee dalka Shiinaha, taas oo dood badan ka dhalisay culeysyada dhaqaale iyo arrimaha qoys ee dalkaasi ka jira.